चर्चाको शिखर चुम्न सफल को हुन् फुलन्देकी ‘आमा’ ? जान्नुहोस - New Sansar
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/चर्चाको शिखर चुम्न सफल को हुन् फुलन्देकी ‘आमा’ ? जान्नुहोस
एक दिन आफू चर्चित हास्य कलाकार हुन्छु भनेर उमेश राईले कहिल्यै पनि सोचेका थिएन । दुई वर्ष साउदी अरेबियामा ‘स्टोर किपर’ को रूपमा काम गरेर वि.सं २०७२ सालमा उमेश नेपाल फर्किए ।
यो क्षेत्रमा नयाँ अनुहार भएपनि उनले ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ नामक कार्यक्रममा निर्वाह गर्ने ‘फुलन्देको आमा’ भूमिकामा कारण उनी रूचाइएका छन्। महिला पात्रको भूमिका गरेपछि लैङ्गिक मुद्दालाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन भएको उनी बताउँछन्।
पुरुष भन्दा महिला कुनै पक्षमा कमजोर नहुने उनको बुझाइ छ। फुलंदेकी आमाको भूमिकाबाट चर्चाको शिखर चुम्न सफल कलाकार हुन् उमेश राई।
देश तथा बिदेशमा रहने नेपालीहरुले उनको अभिनय र नृत्यकौशलको खुलेर तारिफ गरेका छन।
गायिका सरस्वती लामा विरुद्ध १ करोड ६ लाख ठगी गरेको उजुरी
मेरो जीवनको सुरुवात तिमीसँगै र अन्त्य पनि तिमीसँगै – निर्माता छविराज